Fivavahana · Oktobra, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Fivavahana · Oktobra, 2009
Tantara mikasika ny Fivavahana tamin'ny Oktobra, 2009
Amerika Avaratra31 Oktobra 2009
Tamin'ny herinandro, tany Hammond, any Louisiana, Beth Humphrey (fotsy hoditra) sy Terence McKay (mainty hoditra) dia nangataka fisoratam-panambadiana ary nolavina noho ny tsy fitovian'ny fihodiran'izy ireo. Ny Mpitsara misahana ny fandriampahalemana, Keith Bardwell, dia nanambara fa araka ny efa hitany dia “tsy maharitra ny fanambadiana eo amin'ny olon-droa tsy mitovyfihodirana”...
Nepal: Mankany amin'ny fankalazàna ny Dashain tsy misy fanaovana sorona ireo biby
Azia Atsimo14 Oktobra 2009
Ny fety be ara-pinoana Dashain, manan-dànja indrindra any Nepal dia nankalazain'ny diaspora Nepaley eran-tany. Somary nisy olana kely ny Dashain tany Nepal tamin'ity taona ity, noho ireo mpiaro ny zon'ny biby mitaky ny fampitsahàrana ny fanaovana sorona biby mandritra ny fankalazàna.
Maraoka: Rehefa tsy sivana dia fandraofana
Maraoka08 Oktobra 2009
Nanoritra ny làlany teo amin'ny tontolon'ny blaogy ilay kisarisary Ny minisitry ny Atitany Maraokana dia nanapa-kevitra ny hitory ny gazety mpivoaka isan'andro amin'ny teny Arabo Akhbar Al Youm noho ny famoahana sariitatr'ilay Printsy vao nanambady, Moulay Ismail. Tao amina fanambarana ofisialy, no namaritan'ilay minisitra ilay sariitatra ho “manimbazimba ny fianakavian'ny...